Chineke Ọ̀ Baara Anyị Uru? Gịnị Mere E Ji Jụọ Ajụjụ A?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Marathi Mongolian Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
N’otu obodo, e nwere ihe ụfọdụ ndị dere n’oge na-adịbeghị anya n’otu nnukwu bọọdụ e ji agbasa ozi. Ha dere, sị: “Ò nwere uru Chineke baara gị? Ọtụtụ nde mmadụ chere na o nweghị uru ọ baara ha.” Ihe a ha dere gosiri na ha ekweghị na Chineke.
E nwekwara ọtụtụ ndị sịrị na ha kweere na Chineke, ma ha na-ebi ndụ ka à ga-asị na Chineke adịghị. Otu achịbishọp nke chọọchị Katọlik, onye aha ya bụ Salvatore Fisichella, kwuru gbasara ndị chọọchị ya, sị: “Ọ bụrụ na e lewe otú anyị si ebi ndụ, o nweghị onye ga-amata na anyị bụ Ndị Kraịst n’ihi na otú anyị si ebi ndụ bụkwa otú ndị na-ekweghị na Chineke si ebi ndụ.”
Ọtụtụ ndị anaghị ewepụta oge chee echiche banyere Chineke. Ha weere Chineke ka onye nọ ebe dị anya ma ọ bụ onye na-abaghị uru ọ bụla ná ndụ ha. Naanị mgbe ha na-echeta Chineke bụ mgbe ha nọ ná nsogbu ma ọ bụ mgbe ha chọrọ ka Chineke meere ha ihe ọma, ka à ga-asị na Chineke bụ ohu ha.
Ndị ọzọ anaghị eme ihe a na-akụziri ha na chọọchị ha n’ihi na ha chere na o nweghị uru ọ ga-abara ha. Dị ka ihe atụ, na Jamanị, mmadụ atọ n’ime mmadụ anọ ọ bụla bụ́ ndị Katọlik chere na nwoke na nwaanyị ibikọ ọnụ tupu ha alụọ adịghị njọ n’agbanyeghị na chọọchị ha kwuru na ọ dị njọ, Baịbụl ekwuokwa na ọ jọgburu onwe ya. (1 Ndị Kọrịnt 6:18; Ndị Hibru 13:4) Ma, nke bụ́ eziokwu bụ na e nwekwara chọọchị ndị ọzọ chọpụtara na ọ na-abụ chọọchị ha na-ekwu otu ihe, ndị òtù ha ana-eme ọzọ. E nwere ndị isi chọọchị na-ekwu na ndị na-abịa chọọchị ha na-akpa àgwà ka ndị na-ekweghị na Chineke.
Ihe ndị a anyị lebarala anya emeela ka ndị mmadụ jụọ, sị: “Ò nwere uru Chineke baara anyị?” Ọ bụghị n’oge anyị a ka a malitere ịjụ ajụjụ a. Ebe mbụ a jụrụ ajụjụ a bụ n’akwụkwọ mbụ dị na Baịbụl. Ka anyị leba anya n’ihe ụfọdụ dị mkpa e kwuru n’akwụkwọ Jenesis n’ihi na ọ ga-eme ka anyị mata azịza ajụjụ a.